Izinsizakusebenza Zokudonswa Kwamanzi Wemboni Yezimboni: Imifula, Imisele, Amachibi, IMarinas
Amachweba, amatheku, nemigwaqo yamanzi
Ama-dredges asebenza ukugcina ukujula kwamachweba ethu, amatheku, nemigwaqo yamanzi yokuhamba. Ukuthutha abagibeli nezimpahla ngamanzi kungabizi kakhulu kunokuhamba ngomgwaqo - ikakhulukazi ezindaweni ezisathuthuka. Ngokwanda kwenani labantu emhlabeni kuzoba nesidingo esiphakeme sokuphepha okuphephile, kwezomnotho, kanye nokusebenziseka kwamanzi okuhambisa amanzi eminyakeni embalwa ezayo.
Ama-suction we-cutterhead amancane asezingeni eliphakathi nendawo nasesilinganisweni afaneleke kahle ukugcina amachweba endawo, amatheku, nemigwaqo yamanzi kungakhathalekile ukuthi ngabe iphrojekthi isendaweni yedolobha noma eqhelile, eshisayo noma efriziwe.
I-Ellicott inikela ngamamodeli amaningi we-dredge adumile kumaphrojekthi wokwehlisa amanzi emhlabeni wonke. Ithimba lethu lokuthengisa elinolwazi lizosebenza nawe ukukhomba okokusebenza okulungele izidingo zakho zephrojekthi.
Uchungechunge 1870 Dragon® Dredge
I-20 ”x 20” (500 mm x 500 mm)
Uchungechunge 2070 Dragon® Dredge
I-20 ”x 20” (500 mm x 500 mm
Ishidi EqondileBuka i-Virtual Tour
I-8 ”x 8” (200 mm x 200 mm)
I-12 ”x 12” (300 mm x 300 mm)
Super Dragonge Dredge
I-26 ”/ 650 mm
Ukudonswa komfula ukusetshenziswa okusetshenziswa kakhulu kwemishini ye-cutterhead dredge ka-Ellicott. Lawa maphrojekthi angahluka ngokwenhloso nangobukhulu. I-Ellicott® inikela ngezinhlobonhlobo zamadlelo aphakathi nendawo ngesimo ngasinye kulezi ezithile. Amaphrojekthi wokudonswa kwemifula enzelwe ukuphatha ukujula kwesiteshi, ahlinzeke ngokunciphisa izikhukhula, aqede izinto ezingcolisiwe, ajulise iziteshi zokuhamba, futhi asekele, imizamo yezemvelo.
Imiphakathi enqamula umfula ivame ukuba nezikhukhula zaminyaka yonke ngezikhathi zezimvula. Uma umfula ungalawulwa kahle ngodaka, isihlabathi nemfucumfucu kunganqwabelana futhi kwakheke umgogodla. Uma kwenzeka imvula enkulu kwenzeka inhlabathi enqwabelene inganciphisa ukuhamba kwamanzi, futhi umfula ungakhuphuka ngaphezu kwamabhange awo nezakhiwo zezikhukhula endaweni eseduze.
Imiklamo ethwala amaloli ka-Ellicott ivumela ohulumeni basekhaya nosonkontileka ukuthi bathumele ngokushesha izinkume zabo kunoma iyiphi indawo ukuze babuyisele ngokushesha iziteshi ekujuleni okufanele nasekuhanjisweni kwe-hydraulic. Ngemuva kokuthi iphrojekthi isiqediwe, izindawo ezingahanjiswa zingahanjiswa kalula futhi zigcinwe ngaphandle kwendawo kuze kuba ziyadingeka kuphrojekthi elandelayo.
Funda kabanzi ngokudilizwa komfula.
I-Sediment buildup ingumthombo wezinkinga obangela ukujula nezinkinga zekhwalithi yamanzi kuzo zombili amachibi enziwe ngomzimba nangomuntu. Ukuzakhela komzimba kungathinta imisebenzi yokuzijabulisa nempilo yasolwandle. Ngaphezu kwalokho, ukuphambuka okuvela entuthukweni eseduze noma kumaphrojekthi wokwakha kungangcolisa amanzi echibini.
Ngaphandle kokwehliswa kwesondlo okungaguquguquki, izakhiwo zechibi zingancipha ngenani njengoba ukufinyelela kwamachweba kuncipha futhi, amanzi acwebile aba mnyama. Njengoba udaka nezakhi kufinyelela echibini, umphumela ungaba izimila ezisindayo, futhi ulwelwe luyakheka - ekugcineni luholele esimweni sokunqotshwa nokufa kwenani labantu bezinhlanzi zasendaweni ngenxa yehypoxia noma ukushoda komoya-mpilo. Ukudonswa phansi kungavimbela i-eutrophication futhi kungabuye kuguqule inqubo ezimweni eziningi.
Ama-Ellicott dredges akhiwa ukuphatha ukujula kwechibi nokuhlanzwa kwezinto ezingcolile. Isidingo sezinhlelo zokwehlisa echibini siyanda emhlabeni wonke njengoba amadolobha evuselela amachibi angaphakathi kwezokuvakasha kanti abathuthukisi bakha ngasogwini.
Funda kabanzi ngokudilizwa kwechibi.
Ukugcina iziteshi zendlela echwebeni kuvulekile noma ukudala indawo entsha kungazuzisa umnotho wasekhaya ngamazinga amaningi. Ukulungiswa okujwayelekile kwe-dredging kuqinisekisa ukuthi imikhumbi ingahamba ngokukhululeka ngaphakathi kwalawa mapasipoti ngaphandle kwenkinga. Ukuqongelela kuka-silt, isihlabathi, nezinye izinto zokucwilisa kuholela emikhunjini esebenza ngokuguguleka, izindawo ezilimele, izindaba zokuhamba. Amaphrojekthi wemisebenzi yokudonsa ayindlela engcono kakhulu yokugcina ukujula kwesiteshi.
Ukugcina ukujula kwe-marina, kungaba eyimfihlo noma eyomphakathi, kubalulekile ekuvikeleni imikhumbi yabalondolozi emonakalweni. Ukuhlehla okujwayelekile kuqinisekisa ukuthi abagibeli bezikebhe bangakwazi ukuhamba ngokukhululeka ngaphakathi kwalawa mavesi ngaphandle kwenkinga. Ukugcina i-marina icacile kungazuzisa womabili amabhizinisi kanye nemvelo ephakeme lapho kuhlangana khona kabusha.
Ukwakhiwa kuka-silt, isihlabathi, nezinye izinto ezenzeka emachwebeni kuholela ezikebheni eziguguleka, izindawo ezonakalisiwe, izindaba zokuhamba, kanye nebhizinisi elahlekile kumamayini. Uma i-marina idinga ukukhulunyelwa okungenani kanye eminyakeni emibili bese kuthi umthetho-we-isithupha uthi kunengqondo ngokwengeziwe ngokwezimali ukuba ngumnikazi futhi usebenze endaweni yokuhlala kunokuqasha usonkontileka.
Funda kabanzi mayelana nokushona phansi kwe-marina.
Ukwanda kokuhwebelana kwamazwe omhlaba kuholele ekukhuleni okukhulu kwezokuthutha zasolwandle, okubandakanya ukufinyelela emiseleni enakekelwa kahle kubalulekile emabhizinisini emhlabeni jikelele. Uma umsele ungahambeki, imikhumbi nezikebhe izinkampani ezincike kuzo ziyama ngokuphelele.
I-Ellicott Swinging ladder dredge yakhelwe ngamabomu ukusebenza eziteshini ezincane nasemiseleni. Lezi zindawo ezinokwethenjelwa azidingi ukuthi izintambo nezintambo zisebenze ngakho-ke zingaqhubeka nokusebenza njengoba eminye imikhumbi iqhubeka ihamba ngokukhululeka kuwo wonke umsele ngaphandle kokuphazamiseka okuncane.
IVeneging Dredging Fleet Yakha Umnotho
IDredging Rockhold Creek's Charybdis / Annapolis, MD - UMarina Uboshwe nge-Ellicott® Brand Dredge
Ukudonswa kweMuck Kuqala eCoco Cocoa
Ama-Ellicott Dredges amabili asebenza kuProjekthi Yokwanda ePort eLatin America